RecalboxOS: rafitra iray mifantoka amin'ny lalao Retro ho an'ny Rasberry Pi | Avy amin'ny Linux
RecalboxOS: rafitra mifototra amin'ny lalao retro ho an'ny Rasberry Pi
Manohy mandinika ny sasany amin'ireo rafitra misy amin'ny solosainay paosy Raspberry Pi kely izahay. Ao amin'ny amin'ity indray mitoraka ity dia hiresaka momba ny RecalboxOS izahay izay azoko antoka fa maro taminareo no efa nampiasa na reko.
Ho an'ireo mbola tsy mahalala an'io dia azoko lazaina aminao izany RecalboxOS dia rafitra GNU / Linux loharano malalaka sy misokatra noforonin'ny tetikasa Recalbox. Ity rafitra ity dia mifantoka amin'ny famadihana ny Raspberry Pi anao ho console lalao fanahafana ny lalao.
1 Momba ny RecalboxOS
2 RecalBoxOS ho an'ny PC?
3 Sintomy ny RecalBoxOS
4 Ahoana ny fametrahana RecalBoxOS amin'ny Raspberry Pi?
Momba ny RecalboxOS
Recalbox manolotra safidy malalaka amin'ny lalao sy console lalao. Manomboka amin'ny rafitra arcade voalohany ka hatramin'ny NES, MEGADRIVE / GENESIS ary na dia sehatra 32-bit toa ny Playstation aza.
Ny rafitra dia tsy azo ampiasaina amin'ny tanjona kendreny fotsiny fa koa efa napetrakao default ho Kodi. Amin'izay mba Recalbox koa dia ivon-toerana multimedia. Amin'ny fampifandraisana azy amin'ny tamba-jotra an-trano dia hahafahanao mandefa horonantsary avy amin'ny fitaovana mifanentana (NAS, PC, kapila mafy ivelany, sns.)
RecalboxOS dia mampiasa singa maro mahavariana sy misy: EmulationStation2 ho toy ny interface, piFBA ary Retroarch ho emulator ary RaspberryPI NOOBS ho rafitra fametrahana / fanarenana.
Ity rafitra ity Izy io dia manana ny emulateur an'ny console malaza indrindra, izay ahitantsika izany Atari 2600, Atari 7800, NES, Game Boy, Loko zazalahy lalao, lalao zazalahy mialoha, Super nintendo, Famicom Disk System, Master System, Megadrive (Genesis), Gamegear, Lalao sy fiambenana, Lynx, NeoGeo, NeoGeo Pocket, FBA (ROM sasany), iMame4all (ROM sasany), PCEngine, Supergrafx, Amstrad CPC, MSX1 / 2, ZX Spectrum, PSX, Sega Cd, Sega 32X, Sega SG1000, Playstation, ScummVM, Vectrex, VirtualBoy ary Wonderwan.
Anisan'ireo toetra mampiavaka an'ity rafitra ity hitantsika:
Rafitra fanarenana mifototra amin'ny NOOBS: avereno apetraka avy hatrany amin'ny karatra SD anao na ampidino avy amin'ny Internet ny kinova farany.
Fanohanana ny Wifi.
Fandraisana amin'ny tamba-jotra amin'ny lahatahiry ROM, pikantsary, lalao ary fananganana voatahiry (amin'ny alàlan'ny SAMBA na interface Web)
Fikirana fanaraha-maso ao anaty interface: Mametraha indray mandeha, milalao isaky ny tianao.
Fanampiana tafiditra ao amin'ny mpanara-maso PS3, Xbox360, 8BitDo ary Bluetooth (tsiroaroa sy kilalao)
Ny mpikirakira GPIO dia tafiditra ho an'ny mpanara-maso arcade, mpilalao NES, SNES Megadrive, PSX ary XinMo 2.
Tohano ho an'ny Gamepad Virtual Miroof (ampiasao mpanera ny findainao)
Interface miorina amin'ny Aloshi EmulationStation2 lehibe.
Fampivoarana tsara indrindra an'ny FBA miaraka amin'ny fanohanan'ny mpilalao efatra
RecalBoxOS ho an'ny PC?
Ny rafitra tsy ho an'ny solosaina mini miaraka amina processeur ARM ihany fa ihany koa ny mpamorona dia namorona sary rafitra izay azontsika ampiasaina amin'ny solosaina finday na ny solosaikintsika ahafahantsika mankafy an'ity rafitra ity amin'ny solosaina.
Sintomy ny RecalBoxOS
Si te-hisintona an'ity rafitra ity amin'ny Raspberry Pi anao ianao na ny fampiasana azy amin'ny solosainao Tsy maintsy mankany amin'ny tranonkala ofisialin'ny tetikasa ianao izay ahafahanao mahazo ny sary ankehitriny.
Izao dia izao ny rafitra dia ao amin'ny kinova 18.04.20 ary azon'izy ireo alaina avy amin'ity rohy ity.
Ao amin'ny Tsy maintsy misafidy izay fitaovana hampiasainy izy ireo amin'ny RecalBoxOS ary ampidino ny kinova mifandraika amin'izany.
Ahoana ny fametrahana RecalBoxOS amin'ny Raspberry Pi?
Raha mieritreritra ny hampiasa an'ity rafitra ity amin'ny Raspberry Pi ianao Azoko atao ny manoro hevitra anao tsy hampidina ny sarin'ny rafitra ao amin'ny tranokalan'ny tetikasa.
Omeko anao ity maninona ianao no afaka mametraka miaraka amin'ny fanampian'ny NOOBS Miaro fotoana ianao amin'izany ary mila mamolavola endrika sy mamindra ny fitaovanao.
Si tsy fantatrao ny NOOBS afaka mitsidika ianao Ity lahatsoratra ity aiza aho no miresaka momba azy sa azonao atao koa ny mampiasa PINN izay solon'ny NOOBS, ny rohy mankany amin'ny PINN dia ity.
Etsy ankilany, raha tsy te hampiasa ireo safidy ireo ianao ary nanapa-kevitra ny hisintona ny sary RecalBoxOS Azonao atao ny manangona ny sarin'ny rafitra miaraka amin'ny alàlan'ny baiko dd.
Alohan'ny hanaovana izany dia tsy maintsy mamolavola ny karatra SD ianao, azoko atao ny manoro hevitra anao hampiasa Gparted.
Mametraka ny rafitra Mila manokatra terminal fotsiny ianao ary mihazakazaka izao baiko manaraka izao:
Aiza no soloinao ny atiny raha = amin'ny làlana izay nitahirizanao ny sarin'ny rafitra sy ny = amin'ny fipetrahan'ny SD-nao.
Ary amin'izany, mila miandry fotsiny ianao mandra-pahavitan'ny fizotrany hanomboka hampiasa ilay rafitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » RecalboxOS: rafitra mifototra amin'ny lalao retro ho an'ny Rasberry Pi
arles dia hoy izy:
Saingy tsy azonao ny zava-dehibe indrindra, apetraho eo akaikin'ny distro ankafizinay ny Recalbox ary ataovy azo alefa, misaotra
Mamaly an'i arles
LibreOffice 6.0 dia vonona ho an'ny mpampiasa farany sy ny tontolon'ny orinasa